dhangii Lakkoofsaa: Qarshii
durtii dhangii Lakkoofsa Qarshii man'ee filatemeef kennu.durtii
dhangii Lakkoofsa: Qarshii
dhangii Lakkoofsa: Dhibbeentaa
dhangii dhibbeentaa man'ee filatemeef kennu.
Dhangii Lakkoofsa: Durtii
durtii dhangii Lakkoofsa Qarshii man'ee filatemeef kennu.
Dhangii Lakkoofsa: Ida'i bakka kurnyee
kurnyee tokko lakkoofsa man'ee filatemeet ida'i.
Dhangii Lakkoofsa: Haqi bakka
kurnyee tokko lakkoofsa man'ee filatemeeti Haqi.
Dhangii Lakkoofsa: Haqi bakka kurnyee
Galuumsa bitaa keeyyata ammee ykn qabiyyee man'ee hir'isuuf sajoo Galuumsa Hir'isi jedhu cuqaasi akkasumas iddoo cancala durtii isaa qindeessi.
Dhangii Lakkoofsaa : Guyyaa
Dhangii deetaa man'eewwan filataman irratti fayyadama.
Dhangii Lakkoofsaa: Eksiipooneenshaalii
Dhangii Eksiipooneenshaalii, man'eewwan filataman irratti fayyadama.
Deeggarsi CTL yoo dandeessifame, saajoon dabalataa lamatu mul'atu.
Barruun bitaa gara mirgaatti gale.
Barruun, afaan toorii barruu xaxaadhaan dhangeefamee, mirga irraa gara bitaatti gala.
Title is: Kabala Dhangeessuu